शिक्षा खबर – Gaindakot Khabar
संविधानमै तोकिएकाले जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने छ। यसपालिको बजेट कोरोना महामारी केन्द्रित हुनेछ भन्ने धेरैको अनुमान छ। कोरोनासँग कसरी जुध्ने, मान्छेको जीवन र जीविकालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेतर्फ बजेटको ध्यान...
२१, बैशाख,चितवन। झण्डै डेढ महिनासम्म देश लकडाउनबाट गुज्रिरहेका बेला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ का युवा व्यवसायी सुजन ओझाले सामाजिक र मानवीय काम गरेर उदाहरण बन्न सफल हुनु भएको छ । सानैदेखि...
मिलन न्यौपाने विश्वभर अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास छ । सिङ्गो विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा हुदा नेपाल पनि अछुतो छैन जसको कारण राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक जीवन अस्तब्यस्त भएको छ । यसको...
प्याब्सन बुटवल नगर समितिद्वारा बुटवल उपमहानगरपालिकाको बिपत कोषमा ५ लाख ७२ हजार ५ सय ५५ रुपैया प्रदान
१०, वैशाख, बुटवल । नीजि तथा आबासिय बिद्यालय अर्गनाइजेसन ( प्याब्सन ) बुटवल नगर समितिद्वारा आज बुटवल उपमहानगरपालिकाको बिपत कोषमा ५ लाख ७२ हजार ५ सय ५५ रुपैया प्रदान गरेको छ ।...
चैत्र २७, । विश्व अहिले कोरोना भाइरसबाट त्राही त्राही भएको बेला नेपाल सरकारले पनि आफ्नो जनताको जीवन बचाउन देशलाई पूर्ण रुपमा लकडाउन गरेको छ । तर यहाँका केही मानिसहरु अनेकौ बहाना...
लकडाउन समयको सदुपयोग ,अनलाइन कक्षा संचालन गर्दै ग्रीनल्याण्ड पब्लिक स्कूल
चैत्र २७, चितवन । लकडाउन समयको सदुपयोग गर्दै भरतपुर १२, चितवनमा रहेको ग्रीनल्याण्ड पब्लिक स्कुलले एस. इ. इ विद्यार्थीहरुको लागि अनलाइन कक्षा संचालन गरेको छ । यो निः शुल्क अनलाइन कक्षामा सहभागी...
२५ चैत्र । सरकारले वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय सँगै कक्षा ११ र १२ को नतिजा स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा अर्को...